Erey-bixinta Eraybixinta: Buuxinta Dabaasha iyo Gadzook Dhexdooda | Martech Zone
Arbacada, Oktoobar 21, 2015 Axad, Oktoobar 25, 2015 Douglas Karr
Qaab-qorista qoraalku waa ii xiiso. Kartida naqshadeeyayaasha si ay u horumariyaan xarfaha oo labaduba gaar ah oo xitaa awood u leh inay muujiyaan shucuur maahan wax ka yaab badan. Laakiin maxaa ka kooban warqad? Diane Kelly Nuguid isku soo wada duub faahfaahinta ugu horreysa si ay u bixiso aragti ku saabsan qaybaha kala duwan ee warqad qaab qorista. Guji si aad u aragto aragti dhammaystiran.
Qaamuuska eray bixinta eraybixinta
Aperture - Meesha taban ee furitaanka ama qeyb ahaan ku lifaaqan oo ay abuurtay miis furan.
Apex - barta ugu sarraysa ee isku xidhka warqad halkaas oo laba istaroog ku kulmaan; waxaa laga yaabaa inuu wareegsan yahay, fiiqan yahay / fiiqan yahay, fidsan yahay / af xun yahay, iwm.
Qaansada jirida - Faalig qallooc leh oo joogto ah asliga.
Ascend - Qayb ka mid ah font-ka oo kor uga sii gudbaya dhererka dabeecad.
Gacan - Faalig wareegsan oo aan ku xirnayn jirid ku taal mid ama labada daraf.
bar - Garaaca jiifka ah ee jilayaasha A, H, R, e, iyo f.
Aasaaska - Iswaafajinta jiifka ee xarfaha xarfaha.
Bowl - Faalig qallooc leh oo sameeya miis.
Counter - Meesha qayb ahaan ama si buuxda ugu lifaaqan dabeecad gudaheeda.
Qalal Stroke - Xarriiq ku fidsan gunta warqadda.
Dembiile - Qaybta dabeecadda oo mararka qaarkood hoos uga soo degta gundhigga, sida caadiga ah ag, j, p, q, y iyo mararka qaarkood j.
dhegaha - Faaligga yar ee ka soo baxa xagga sare ee yar.
Foot - Qaybta jirida ee salka ku haysa.
Gadzook - Qurxinta isku xidha labada xaraf ee Ligature.
Joint - barta uu istarooggu ku xidho jirida.
Kacsi - Masaafada u dhexeysa xarfaha eray.
Hogaaminta - Masaafada udhaxeysa aasaaska hal xariiq oo qoraal ah oo ku xigta.
Lugtaada - Faalig gaaban, oo ka soo degaya warqad.
Saxeex - Laba ama in ka badan oo xaraf oo isku xidhan si ay u noqdaan hal dabeecad; ugu horreyn qurxin.
Dhererka khadka - Immisa xaraf ayaa xariijin ka hor intaadan bilaabin bilowga.
loop - Qaybta hoose ee ka yar g.
serif - Saadaashu waxay sii fidi doontaa garaacista weyn ee dabeecadda. Sans serif macno ahaan waxaa loola jeedaa 'la'aan' Serif. Noocyada ku saleysan Serif ayaa lagu yaqaan inay dadka ka caawiyaan inay si dhakhso leh wax u akhriyaan maaddaama qaabka ereyga si fiican loo qeexay
garabka - Wareegga qalooca ee h, m iyo n.
Ku dabaalan - Kordhin lagu qurxiyo ama istaroog ku yaal qaabka warqadda.
stem - Garaaca toosan ee toosan, toosan ee warqad (ama jajab marka aysan jirin wax toosan).
Stroke - Khad toosan ama qaloocsan oo sameeya baararka, gacmaha, jirridaha iyo fijaannada.
terminal - Dhamaadka istaroog kasta oo aan ku jirin serif; waxaa ka mid ah boosteejada kubadaha (wareegsan qaab ahaan) iyo finials (qalooca ama cajalad qaab).
Vertex - barta barta ugu hooseysa ee astaamaha ay ku kulmaan laba istaroog.
x-dherer - Dhererka dabeecadda caadiga ah (marka laga reebo wax fuulid ama soo deg ah)
Janie Kliever ayaa bixiyay kii labaad infographic loogu talagalay Canva oo leh faahfaahin dheeraad ah. Guji si aad u booqato maqaalkooda si qoto dheer u aragto mid kasta.
Tags: dhaqdhaqaaqCardiffqaansada jiridagacantakor u kacaterminal kubbaddabarsaldhiggabowlcanugacounteriskutallaabfaracDiane Kelly Nuguiddhegtafontqaybaha fontxarfahafootgadzookJanie Klieverwadajirharaatitaasoo keentaylugtadhererka xariiqaLoopqaybo fontla’aanserifgarabkacodkagaraacadhaqidterminalereyadasawiradaqaamuus qoristaeraybixin qoraal ahereyadax-dherer
Dhulkii Loo Balan Qaaday: Suuqgeynta Faa'iidada Leh ee Joogteysan ROI Waa Soo Socotaa